Wararka - Baiyun kiimikada maalinlaha ah ayaa kaqeyb qaatay Carwo Canton Fair 129th
Laga bilaabo 15-ka ilaa 24-ka Abriil, Carnaanta 129-aad ee Shiinaha Soo-Dejinta iyo Dhoofinta ("Canton Fair") ayaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah. Ku dhowaad 26000 oo bandhigeyaal ah, in ka badan 2.7 milyan oo bandhigyo iyo iibsadayaal ka socda 5 qaaradood ayaa ka qayb geli doona carwada. Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. ayaa ka qeyb gali doonta Canton Fair, waxay keeneysaa taxane kala duwan oo badeecooyin ah, saabuuno, saabuun dharka lagu dhaqo iyo saabuun dareere ah. Noocyo badan oo badeecado ah, tayo wanaagsan leh, oo ay si fiican u heleen macaamiisha.
Waxaan diyaarinay qolka bandhiga ee khadka tooska ah ee Carwada Canton Fair si aan ugu muujino alaabta si toos ah tabinta. Inta lagu guda jiro Carwada Canton, waxaan ka soo saari doonnaa 8 tabin toos ah, oo ku saabsan alaabteenna kala duwan. Alaabooyin badan ayaa lagu soo bandhigi doonaa qolkeena warfaafinta, faahfaahin kasta oo badeecada ahna si taxaddar leh ayaa loo soo bandhigi doonaa. Markaas waxaad arki kartaa badeecada aan soo bandhigi karno, iyo adeegga aan bixin karno.
Ku soo dhowow asxaabta adduunka oo idil inay nagula kulmaan Carwada Canton. Waqtigaas, waxaad wax badan ka baran kartaa warshadeenna, awooddeena wax soo saar, R & D iyo awoodda naqshadeynta. Waxaan rajeyneynaa inaan lashaqeyn doonno asxaabteena cusub iyo asxaabteena hore mudo dheer waana wada horumarin doonaa dhamaanteen.
Qolka carwada ee Carwada Canton: